Mayelana NATHI - Fengcheng Zhonghe Paper Products Co., Ltd
I-Fengcheng Zhonghe Paper Products Co, Ltd ingumkhiqizi oholayo wekhava yesihlalo sephepha lendlu yangasese neminye imikhiqizo yephepha. Selokhu yasungulwa ngo-1999, uFengcheng Zhonghe Paper Products ubelokhu egcina intuthuko esheshayo nokwenziwa kwezinto ezintsha njalo, futhi uhlala ethokozela umkhiqizo ophakeme kakhulu kanye nesabelo esikhulu semakethe yokuthekelisa. Imikhiqizo yephepha le-Fengcheng Zhonghe yinkampani eqinisekisiwe ye-ISO9001 ne-ISO14001, futhi yadlulisa isikhangiso esiphelele se-Bureau Veritas (BV) ngokuya ngezinkinga ze-QSA, SER nezokuphepha.
Imikhiqizo yephepha le-Fengcheng Zhonghe lisetha izindawo zalo zokwenza iphepha, lilawula kahle ikhwalithi kusuka ekuhlolweni. Ku-2018, sisungule ngobuchwepheshe imigqa yokukhiqiza okuzenzakalelayo futhi ekuqaleni sashintsha indlela yokukhiqiza kusuka kumanyuwali kuya ekukhiqizeni umshini wokuzenzekelayo. Ukukhiqizwa kokuzenzekelayo okukhulu kusenza sihlinzekele ukulethwa okuphezulu okuphezulu, iphepha lekhwalithi elingcono nemikhiqizo yezomnotho ethe xaxa.
Imikhiqizo yephepha le-Fengcheng Zhonghe ingaveza uchungechunge lwemikhiqizo yamaphepha: ikhava yesihlalo yangasese engu-1/2, ikhava yesihlalo yangasese engu-1/4, ikhava yesihlalo yangasese, iphepha lokuqala lesembozo sesihlalo sangasese, iphepha lezicubu, ithawula lephepha nephepha elihlanganisa ingilazi, njll. Qedela uhlelo lwe-QC, abasebenzi abanolwazi lokuhlola kanye nezinsimbi zokuhlola ezanele ezenza imikhiqizo yethu yephepha ikwazi ukuhlangabezana nokucaciswa kwekhwalithi eqinile nezinga lomhlaba jikelele. Iphepha lethu lekhava yesihlalo yangasese lidlulise isivivinyo se-SGS, i-RoHS. Iningi lemikhiqizo yethu yamaphepha, ikakhulukazi ikhava yesihlalo yangasese yamaphepha ithunyelwa emakethe yase-USA naseYurophu.
Ithimba lenkampani labathengisi abazinikele nabashintshi bamashadi, ama-charter agents agents, abaphathi bezikebhe, ochwepheshe bezokumaketha nabasebenzi bonke babelana ngentshisekelo yangempela yokuba olwandle futhi bebonke banolwazi olubanzi nolwazi ngaphezu kwanoma ngubani omunye embonini.